Lalao vaovao hita ao amin'ny Apple Arcade: Legends of Kingdom | Vaovao IPhone
Angano momba ny fitadiavana fanjakana dia ilay lalao vaovao hita ao amin'ny Apple Arcade, sehatra iray izay efa roa volana tsy nahazo lohateny vaovao, sehatra iray izay Afaka nanisa ny andro aho satria, na eo aza ny fisian'ny Apple One, mpampiasa Tsy mampiseho fahalianana amin'ity sehatra ity izy ireo.
Tamin'ny 2 aprily, Apple dia nanisy anaram-boninahitra vaovao am-polony ho an'ny Apple Arcade, lohateny toy ny NBA 2K21 Arcade Edition sy Star Trek: Legends hanome anarana ny manaitra indrindra, ankoatry ny kilasika maro be. Hatramin'izao, ity hazakazaka ity dia niharan'ny haintany an-loharana, haintany izay nifarana tamin'ity anaram-boninahitra vaovao ity, izay hanaraka an'i Frenzic: Overtime amin'ny 18 Jona.
Legends of Kingdom dia a anjara toerana izay tsy maintsy hisafidianantsika vondron'olona maherifo, avy amin'ireo 11 misy amin'ny fahaizana sy hery samihafa, hamakivaky ny fanjakana nofinofy sy hiadiana amin'ireo biby goavambe izay anisan'ny fandrahonana avy amin'ny extraplanar.
Rehefa mandroso amin'ny lalao isika dia mandeha mamoha mahery fo vaovao amin'ny lohateny iray izay tsy maintsy hamindrantsika ireo maherifontsika amin'ny alàlan'ny takelaka hexagonal mba hampifanaraka ny fahaizan'izy ireo amin'ny tetikadintsika ady.
Ity lohateny vaovao ity dia tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny Apple Arcade ho an'ny iPhone, iPad, Mac ary Apple TV. Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana misy efijery mikasika ary afaka manao izany koa isika mampiasa bokotra fanaraha-maso.
Tonga ny hafanana, hafanana mifandraika amin'ny fialan-tsasatra telo volana ho an'ny ankizy kely, ka m izanyfambara mety tsara hampiasa an'ity sehatra ityNa izany aza, toa tsy toa ny tamin'ny taon-dasa amin'izao fotoana izao, ny vaovao, raha tonga izy ireo, dia alefa amin'ny dropper.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Lalao vaovao hita ao amin'ny Apple Arcade: Legends of Kingdom
Aleksandar dia hoy izy:
Valiny tamin'i Aleksandar
Ny fampiharana Photos ao amin'ny iOS 15 dia hampahafantatra antsika izay fampiharana niavian'ny sary